नेपाल बन्दको ताजा अपडेट, देशभर कहाँ-कहाँ भयो बम बिस्फोट र आगजनी ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा — Imandarmedia.com
नेपाल बन्दको ताजा अपडेट, देशभर कहाँ-कहाँ भयो बम बिस्फोट र आगजनी ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
काठमाडौं । नेपाल बन्दको कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । काठमाडौंमा पनि बन्दको प्रभाव परेको छ । लामो दुरीका यातायात चलेका छैनन् भने शैक्षिक सस्थाहरु सबै ठप्प छन् । फ्याट्टफुट्टरुपमा केहि गाडी र मोटरसाइकल देखिए पनि राजधानी अरु दिनको तुलनामा ठप्प छ ।
बन्दको दिन ठाउँमा बिस्फोट भएका छन् भने शंकास्पद बस्तु भेटिने क्रम पनि जारी छ । बन्द अबज्ञा गरेको आरोपमा केहि ठाउँमा सवारीसाधनहरुमाथि तोडफोड र आगजनी समेत भएको खबर प्राप्त भएको छ । बन्दकै दिन काठमाडौं लगायत आसपासका २० ठाउमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।